တကူ သားလေး ရဲ့ နည်းပညာ စုစည်းမှု: ဓါတ်ပုံပြုပြင်ဖို့ အကောင်းဆုံး Photo Mate R2 v1.1 Apk For Android
ဓါတ်ပုံပြုပြင်ဖို့ အကောင်းဆုံး Photo Mate R2 v1.1 Apk For Android
ဓါတ်ပုံတွေကို Android ထဲမှာလိုချင်သလိုပြုပြင်ဖို့အတွက် အတော်လေးကောင်းမွန်တဲ့ Application လေး တစ်ခုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ Photo Mate R2 v1.1 Apk လို့အမည်ရတဲ့ Application လေးပါ။ မိမိတို့ အနေနဲ့ပြုပြင်ချင်တဲ့ ဓါတ်ပုံကို ပြုပြင်နိုင်တဲ့ Tools တွေစုံလင်စွာပါဝင်ပါတယ်။ Photoshop နီးပါး ပြုပြင်နိုင်ပါ တယ်ဗျာ။ Tools တွေစုံလင်မှတော့နည်းနည်းတော့မြင့်ပြီပေါ့ဗျာ။ Android OS 4.0 နှင့်အထက်ဖုန်းများမှစပြီး အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အခြားသော Feature ပေါင်းများစွာပါဝင်ပါသေးတယ်။ ကိုယ်တိုင် ကလိ ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ Feature တွေအများကြီး ကိုသိရမှာပါ။
Photo Mate R2 isacomplete raw-developer, image organizer and editor!
Full-Resolution depends on your device. Recommended are:
Posted by အောင်မျိုး at 11:07 PM